Dowlada Kenya oo xaqiijisay in askar looga dilay weerar ka dha... | Universal Somali TV
Dowlada Kenya ayaa xaqiijisay in hal askari oo ka tirsan ciidankeeda uu ku dhintay halka sadex kale ay ku dhaawacmeen kadib weerar saacado socday oo habeenimadii xalay ka dhacay xero ciidanka booliska xuduudaha ee sida milatariga oo kale u tababaran ee loo yaqaan RBPU-da ay ku leeyihiin degaanka Yumbis ee dhaca degmada Fafi ee koonfurta Ismaamulkan Garissa.
Isku duwaha dhanka amniga ee gobolkan waqooyiga Bari Mr Nick Ndalama ayaa xaqiijiyay in askarta dhaawaca uu ka soo gaaray weerarkan loo soo qaaday magaaladatan Garissa oo haatan lagu Daweynayo.
Weerarka oo bilowday abaara 7 fiidnimo ee xalay ayaa dadka deegaanka waxay sheegeen in ay maqleen qaraxyo waaweyn k hor inta aysan bilaaban daryanka rasaasta culus oo labada dhinac ay isku Adeegsanayeen.
Dadka deegaanka ayaa dhanka kale xusay in dableyda weerarka ku qaaday xerada ay cabsi galin ku abuureen iyaga oo ku eedeynaya in warar iyo macluumaadka amni ay la wadaagaan ciidanka Booliska ee ku sugan Yumbis.
Dableyda weerarka ka danbeysay oo la aaminsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa dhanka kale gubay dhowr guri oo ku yaal tuulada Banane oo mid ka mid ah uu lahaa maamulaha iskuul hoose oo ku yaal Aagaasi.
Mr Nick Ndalama ayaa dhanka kale xusay in dableyda ay miino ku aaseen wadada balse ciidanka amniga aysan waxyeelo ka soo Gaarin kuwaasi oo ka jawaab celinayay dabka la qabadsiiyay guryaha ku yaal Tuuladaasi.
Arbacadii shalay ayay aheyd markii ciidanka la dagaalanka Argagixisada Kenya ee loo yaqaan ATPU-da ay gacanta ku dhigeen boorso ay ku jirtay rasaas iyo waxyaabaha qarxa oo taalay deegaanka Xayley oo ka tirsan degmada Fafi.
Boorsadaan oo aan la ogeyn cida iska leheyd ayaa waxaa socda baaritaanada cida goobta dhigtay sida uu xusay isku duwaha dhanka amniga ee gobolkan waqooyi Bari.
Si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa ku soo aadaya laba todobaad kadib markii dabley hubeysan ay burburiyeen taawarka shirkada Isgaarsiinta Safaaricom ee deegaanka Korkora ee dhanka koonfureed qiyaastii 20 kiilo mitir kaga beegan magaalada Garissa.
Kan-xigaCarro ka dhalatay laba nin oo lagu di...
Kan-horeMadaxweyne Trump oo markii ugu horeys...
57,071,312 unique visits